Soo dejisan DVDFab Passkey 9.3.6.9 – Vessoft
WindowsCD & DVD & USB gaariCD & DVD-ga ripperDVDFab Passkey
Bogga rasmiga ah: DVDFab Passkey
DVDFab Dood-Furashada – software si loo furo DVD-ga iyo Blu-ray, kaas oo ka saaraya qawaaniinta gobolka iyo nuqul ka ilaalinta si markaas loo isticmaalo inuu u ciyaaro waxyaabaha la socdo oo aan lahayn xayiraad. DVDFab Dood-furka wuxuu dhaafi karaa dhammaan hababka ilaalinta DVD-ga, sida RCE, CSS, APS, UOPs, iyo sidoo kale saaraan ilaalinta Blu-ka, sida BD, BD +, AACS ama noocyada kale ee codka. Software wuxuu kuu ogolaanayaa inaad xakameyso waxyaabaha ku jira nuqulka, ku duubo disk adag ama sawir. DVDFab Dood-wadaag wuxuu la falgalaa alaabada kale ee shirkadda iyo barnaamijka saddexaad si loo galo loona badalo nuxurka maqaar-celiska, kaas oo si ballaaran u kordhiya fursadaha. DVDFab Passkey ayaa sidoo kale la socota dhowr waxyaabood oo faa’iido leh kuwaas oo kuu oggolaanaya inaad ka saarto PGC-yada filimada asalka ah isla markaana si sahlan u beddeli kara amarka heesida filimka.
Si aad u saarto inta badan hababka loo ilaaliyo DVD iyo Blu-ray
Si aad udhigto oo aad nuqul ka sameysid waxyaabaha ku jira
Si aad u isticmaasho software saddexaad si aad u heshid nuqulka disk la’aanta
Cusbooneysiin toos ah
English (United States), العربية, Français, Español...
Soo dejisan DVDFab Passkey
Faallo ku saabsan DVDFab Passkey
DVDFab Passkey Xirfadaha la xiriira